संघको नेतृत्व गर्न योग्यता पुगेको छ –मीनराज कडेल « Sahakari Nepal
संघको नेतृत्व गर्न योग्यता पुगेको छ –मीनराज कडेल
प्रकाशित मिति :4November, 2014 12:25 pm
राष्ट्रिय सहकारी संघको चुनाव नजिकिन थालेको छ, के छ चुनावको तयारी ?
राष्ट्रिय सहकारी संघको अहिलेको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिदैँ छ । अवधि सकिएकाले यस वर्ष चुनावको चर्चा भएको हो । साउनको २२ र २३ गते नयाँ निर्वाचन सहितको साधारणसभाको मिति तय भएको छ । संस्थाहरु नवकिरण गर्ने क्रम बढेको छ । उम्मेदवारीको हकमा भने छलफल चल्दै छ । विगतको हाम्रो परम्परा के छ भने सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गर्ने परिपाटी भएकाले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै साथीहरु समेट्नेगरी नयाँ टिम बन्ने छ । केही दिनअघि कार्यक्रम भएको थियो । त्यसमा डिल्ली तिवारीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो, मैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने ठाउँ नभएपनि संघको नेतृत्व गर्न म योग्य छु भनेको थिएँ । म २०५४ सालदेखि नै राष्ट्रिय सहकारी संघको प्रतिनिधि छु । ७ वर्षदेखि त्यसको सञ्चालक सदस्य भएर काम गरेको छु । दुई कार्यायल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ(नेफ्स्कुन)मा बिताइसकेकाले संघको नेतृत्व गर्न मेरो योग्यता पुगेको ठान्दछु ।
सहकारी क्षेत्रका चुनौति र अवसर धेरै छन् । राज्यले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका अघि सारेको छ । यसतर्फ सहकारीले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरेको अवस्थामा यसलाई सबल खम्बाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ । यस क्षेत्रमा अवसर पनि थुर्पै छ । सुक्ष्मढंगले सहकारीको अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेँ, भोली संघको नेतृत्वमा पुग्दा काम गर्न सजिलो हुने छ । यद्यपी हामी छलफलमै छौं, कसरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेबारे व्यापक छलफल भइरहेको छ । समय पनि बाँकी छ र छलफल पनि भइरहेकोले गर्दा सकभर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं भन्ने छ, यदी चुनाव भयो भने पनि प्रजातातान्त्रिक अभ्यास नै हुन्छ । कुनै समस्या छैन् । नियमित साधारणसभा भएपनि चुनावी साधारणसभा भएकाले बजारमा चर्चा आइरहेको छ ।
अहिलेसम्मको माहोलले चुनाव हुने संभावना बढेको छ कि, सर्वसम्मततबरले नेतृत्व चयन गर्ने तयारी छ ?
मलाई लाग्छ, सबै पदमा सर्वसम्मत नहुन पनि सक्छ । किनभने सदस्यमा इच्छा, आकंक्षाहरु धेरैका छन् । सञ्चालक सदस्यमा महत्वकाक्षां धेरैको भएपछि चुनाव हुन सक्ने संभावना रहन्छ । तर पदाधिकारीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन पनि सक्छ । सञ्चालकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि पलाएको छ । संघमा आएर काम गर्ने धेरै मान्छेको चाहना हुदाँ प्रजातान्त्रिक ढंगले चुनावमा जान सकिन्छ ।
तपाईले सर्वसम्मतको कुरा गर्नुभयो, संघको परिपाटी के देखिएको छ, भने , सहकारीकर्मीभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने, अहिले पनि त्यसै गर्न लागिएको त होइन ?
यसको बारेमा यहाँलाई प्रष्ट भन्नै पर्छ, शुरुदेखि नै म यसको विरोधी नै हुँ । राष्ट्रिय सहकारी संघमा तपाईले भन्नुभएजस्तो भएकै हो । राजनीतिक दलका नेतृत्वतहमै बसेका साथीहरुले सहमति गरी नेतृत्व चयन गरेको अवस्था हो । त्यो प्रक्रिया राम्रो होइन । तर सहकारीभित्र के छ भन्दा बहुदलिय सिष्टममा राजनीतिक आस्थाबिना कोही अछुट छैन् । सहकारी क्षेत्रमा लागेका साथीहरु, जो दत्तचित्त भई लाग्नुभएको छ,त्यस्ता व्यक्तीको भवना समेट्नेगरी टिम तयार गर्नुपर्छ । त्यो सर्वसम्मत पनि हुन सक्छ, निर्वाचनबाट पनि जान सक्छ । अध्यक्ष या उपाध्यक्षले मात्र सबै काम गर्ने होइन, यो एउटा टिमवर्क हो । सबैको भवना समेट्नेगरी जानुपर्छ न कि पार्टीगत एंव दलीय भागबण्डाबाट जानु राम्रो होइन ।
भनेपछि अघिल्लो कार्यकालजस्तो राजनीतिक भागबण्डा हुदैँन, अबको नेतृत्वमा ?
त्यस्तो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ, किनकी हामी अरु संघहरु पनि चलाइरहेका छौं । अन्य संघहरुमा त्यस्तो अभ्यास गरिएको छैन् । सबैको भावना प्रतिनिधित्व होस् भन्नेमा ख्याल पु¥याउनुपर्दछ । तर दलगत हिसाबले भागबण्डा गर्ने राम्रो होइन भने लाग्छ, मलाई । अब सहकारी बुझेका, सहकारीमा रहेर लामो समय काम गरेको व्यक्ति नै सहकारीमा जानुहुनेछ, न कि राजनीतिक भागबण्डा पु¥याएर जाने परिपाटी राम्रो होइन ।
एक तिहाई सहकारीले ओगट्न सक्छ, त्यस ठाउँमा पु¥याउनका लागि मैले पहल गर्ने छु । कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकारी लाग्न सक्छ । उत्पादन, सेवा र बित्तीय क्षेत्रमा सहकारीलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सके हाम्रोजस्तो देशमा कायपलट गर्न सक्छ । अहिले भर्खर मात्र सहकारी अभियान र सरकारको संयुक्त आयोजनामा सहकारी महासम्मेलन गरेका छौं । सहकारी महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्न म निरन्तर लाग्ने छ ।
सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिन सकिएको देखिदैँन नि, खासमा के हो ?
२०६४ मा टंकमणि शर्मा रजिष्ट्रार हुदाँ मोटामोटीरुपमा सहकारीको ३ प्रतिशत योगदान छ भन्ने थियो । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ जस्तो लाग्छ । वास्तविक तथ्यांक आएको छैन् । सहकारीको योगदानको सही मूल्यांकलन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले सहकारीलाई उपेक्षा गरेकै हो ?
सही तथ्यांक ल्याउने काम त राज्यको नै हो । राज्यले सही तथ्यांक ल्याउन सक्नुपर्दछ । सहकारी विभाग र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सही तथ्यांकका लागि अध्ययन गर्नुपर्दछ । दूग्ध सहकारीको ९ प्रतिशत योगदान छ । दूध उत्पादन गर्ने किसान अधिकांश सहकारीमा आबद्व छन् । अब सहकारीले समग्र पूँजि उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानुपर्दछ । तीन खम्बे अर्थनीति भएपछि सहकारीले ३३ प्रतिशत योगदान पु¥याउनुपर्छ । राज्यको पनि लगानी हुनुपर्दछ । सहकारीले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ ।
सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्र तीन पक्ष मिलेर जानुपर्दछ । जीवनस्तर बदल्ने, संमृद्वि हाशिल गर्न सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्दछ । सन् २०२० मा सहकारीको योगदान दोब्बार बढाउनुपर्दछ । रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
बेलाबेलामा सहकारीमा समस्या देखा पर्छन, समस्या निराकरण गर्न संघले के भूमिका खेल्न सक्छ ?
तालिम, सूचना र शिक्षामार्फत सहकारीलाई सुुसुसित गर्ने, सही ढंगबाट सञ्चालन गर्नमा जोड दिने हो । संस्था खारेज गर्ने, कारवाही गर्ने, निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संघले गर्न सक्दैन् । हामीले सदस्य संस्थालाई तालिम, शिक्षा र सूचना दिने हो । मूल्य, मान्यता र नियममा सञ्चालन गर्न उत्पे्ररित गर्ने हो । कहिलेकाहीँ राज्य निरकुंश भएर सहकारीलाई अंकुश लगाउन सक्छ, त्यसबेला सहकारीको पक्षमा काम गर्नुपर्दछ । सहकारीमैत्री, नियमकानुन बनाउन लभिङ गर्नुपर्दछ । जो समस्यामा परे, उनीहरुले सहकारीलाई कमाउने भाँडो बनाए । अब त्यस्ता व्यक्ति संघको फन्दमा पर्ने छन् ।